Falanqayn: Daacish oo caqabad ku ah canshuurta Al Shabaab - BBC News Somali
Falanqayn: Daacish oo caqabad ku ah canshuurta Al Shabaab
22 Agoosto 2018
Lahaanshaha sawirka ISLAMIC STATE PROPAGANDA
Image caption Daacish waxay Farrii-qoraaleedyo hanjabaad ah u diraan ganacsatada iyo meheradaha si ay u dhiibaan canshuur
Kooxda dawladda islaamiga ayaa "canshuur xad-dhaaf ah" ku soo rogtay ganacsatada iyo shirkadaha waqooyiga bari ee Soomaaliya, wax u muuqda isku day ay kula xafiiltamayaan farsamooyinka canshuur uruurinta ee Al Shabaab.
Kooxdu waxay kaloo kordhisay weerarrada ka dhanka ah ciidanka dawladda ee koofurta Soomaaliya, talaabo loo arko inay wargelin u noqotay canshuurta ay ku soo rogeen maamul goboleedka waqooyiga bari ee Puntland.
IS waxay farriimo hanjabaad ah u direen ganacsatada iyo meheradaha, ayagoo amar ku siiyey "inay si joogto ah u bixiyaan lacago canshuur ah" ama ay khatar u galaan dhimasho.
"Ganacasatada iyo meheradaha Boosaaso weli waxay ku shaqeeyaan jawi cabsi leh, ka dib markii lacag aad u badan ay weydiisteen kooxda dawladda Islaamiga qaybteeda gobolka" Garowe Online ayaa sidaa ka soo xigatay qof ganacsade ah.
Inta ay le'eg tahay lacagta ay tahay in qof walba ama shirkad walba ay dhiibto ayaan la cayimin.
Falanqayn: Dhaqdhaqaaqyada Daacish ee Soomaaliya
Garab ka tirsan Shabaab oo Daacish ku biiray
Beenin dhif ah oo Al Shabaab sameeyeen
7dii Agoosto, Cabdullaahi Cali Cumar, oo shirkad isgaarsiineed wakiil uga ahaa Boosaaso, ayaa lagu soo warramay in la khaarajiyey, ka dib markii uu canshuur siin waayey Al Shabaab.
Si degdeg ah oo aan caado u ahayn ayey Al Shabaab durbaba u beeniyeen mas'uuliyadda falkaas, taasoo muujisay in kooxda IS ay dhici karto inay mas'uul ka ahayd.
Dhaqan lagu yaqaano Al Shabaab ma ahayn,kuwaasoo bartilmaameedsada saraakiisha ciidanka iyo xukuumadda, inay beeniyaan dilka ay gaystaan dadka aan la aqoonsan.
Wararku waxay sheegayaan in kooxda IS ay burburiyeen birta dheer ee siinka ah oo ay shirkadda Golis ku lahayd Qandala, ka hor inta aan Cabdullaahi la dilin.
Mareegta wararka ee Dhacdo waxay sheegtay in dilka "lala xiriirinayo lacago ay IS uruuriyeen, lana arkay farriimo lagu cabsi galinayo dad kale".
Hanaanka canshuuraha ee IS (Daacish)
IS waxaa la sheegayaa in boqollaal dagaallamayaal ay u joogaan Puntland, tiro aan la cayimin oo dilayaal ahna ay u joogaan koofurta Soomaaliya.
Lacagaha ay iminka canshuur ahaanta uga qaadayaan ganacsatada inay ku kabaan lacagta ay ka helaan dibadaha ee aan la garanayn ayaa muujinaysa in kooxda ay dhibaato ka haysato sidii ay dhaqdhaqaaqyadeeda u joogtayn lahayd.
Waxay kaloo astaan u noqon kartaa inay ku haminayaan in hawlahooda ay ku baahiyaan Soomaaliya.
2dii Agoosto, maxkamad ku taalla Muqdisho waxay xukun ku ridday laba shakhsi oo lagu helay inay IS la shaqaynayeen, ayna isku dayayeen inay ka furaan qaybta kooxdaas ee koofurta Soomaaliya. Mid ka mid ah dadka la eedeeyey, Maxamed Daa'uud daahir Warsame, wuxuu mas'uul ka ahaa uruurinta lacagta dibadda laga soo xawilo ee la soo mariyo shirkadaha xawaaladaha, sida lagu xusay caddaymaha maxkamadda.
Bishii Febraayo, Maraykanku wuxuu liiska madow galiyey ku xigeenka hogaamiyaha IS ee Soomaaliya, Mahad Macallin. Qoraal ay soo saartay waaxda arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa lagu sheegay in Mahad uu fududeeyey in hub iyo dagaallamayaal laga keeno Yemen.
Maraykanku wuxuu kaloo xayiraad ku soo rogay Maxamed Mire Cali Yuusuf iyo shirkadihiisa, Liibaan Trading iyo Al Mutafaq Commercial Company - ayagoo lagu eedeeyey inay dhaqaale ku siiyaan IS (Daacish) Soomaaliya. Maxamed waxaa markii dambe Muqdisho ku qabtay ciidanka sirdoonka ee Soomaaliya. Wuxuu beeniyey inuu xiriir la leeyahay IS.
Hanaanka Canshuuraha ee Al Shabaab
Image caption Al Shabaab waxay canshuur ka qaadaan koofurta, bartamaha iyo waqooyiga bari ee Soomaaliya
Al Shabaab waxay leeyihiin hanaan isku xiran oo ay canshuurta uga qaadaan badeecadaha iyo adeegyada qaybo badan oo ka tirsan Soomaaliya.
Kooxdu waxay kaloo leedahay koox maaliyadeed oo qiimaysa qiimaha badeecadaha iyo adeegyada, ka hor inta aan canshuur lagu soo rogin. Waxay kaloo qaadaan canshuurta maridda waddada, waxayna lacago ka qadaan dadka hodanka ah ee u shaqeeya hay'adaha iyo shirkadaha.
Sida uu sheegayo machadka Hiraal, Al Shabaab waxay sannad kasta ka qaadaan 8 Malyan oo Doollar sakawaatka xoolaha ee koofurta iyo bartamaha Soomaaliya.
Waxay kaloo lacag aad u badan ka qaadaan dhuxusha laga dhoofiyo koofurta Soomaaliya.
Tan iyo 2017, Al Shabaab waxay sare u qaadeen canshuuraha ay ka qaadaan ganacsatada Muqdisho, kuwaasoo badidood ka shaqaysta suuqyada Bakaaraha iyo Suuq Bacaad oo ah labada suuq ee dalka ugu waaweyn.
Mararka qaarkood saraakiisha maaliyadda u qaabilsan Al Shabaab waxay u yeeraan milkiilayaasha ganacsiyada inay yimaadaan meelaha ay xoogga ku leeyihiin, oo ay zakawaatka si kaash ah u bixiyaan.
Xukuumadda Federaalka iyo maamulayaasha gobollada waa ay ka warqabaan nidaamka canshuuraha ee Al Shabaab.
Madaxweynaha Puntland, Cabdiweli Max'ed Cali Gaas wuxuu sheegay in ganacsatada Boosaaso ay canshuur siiyaan Al Shabaab ayagoo ka baqaya in la ciqaabo, halkii ay maamulkiisa siin lahaayeen.
Ra'iisul wasaare Khayre ayaa isna ku eedeeyey ganacsatada inay lacag badan oo canshuur ah siiyaan Al Shabaab halkii ay ka siin lahaayeen xukuumadda Federaalka.
Kooxda waxaa lagu qiyaasaa in ay uruuriyaan ilaa 27 Malyan oo Doollar oo canbshuur ah sannadkiiba. Laakinse lacagtaas badankeed - 25 malyan oo ka mid ah waa la kharash gareeyaa. Waxaa la sheegay in aysan ku guuldarraysan inay dagaallamayaashooda mushaar siiyaan.
Xafiiltanka u dhaxeeya Al Shabaab iyo IS (Daacish)
Image caption Al Shabaab waxay khaarajiyeen dhowr ka tirsan dagaallamayaasha Daacish ee Soomaaliya
Fiditaanka Daacish ay ku fidayso koofurta Soomaaliya ayaa ka dhigay iska hor imaad dhex mara ayaga iyo Al Shabaab mid aan laga fursan karin.
Inkastoo IS ay juhdi badan galiyeen sidii ay dhul u qabsan lahaayeen, waxay haddana sare u qaadeen weerarrada ay ka sameeyaan Soomaaliya bilihii u dambeeyey, gaar ahaan meelaha ay Al Shabaab ku xooggan yihiin ee koofurta.
Talaabada ay canshuuraha ugu soo rogeen Puntland waxay iftiiminaysaa isku dayga aan gambashada lahayn ee Daacish ay ku doonayso inay ku kala dhantaasho nidaamka maaliyadda ee Al Shabaab.
Mareegta wararka Garowe Online ee u janjeerta dhanka dawladda waxay sheegtay in dagaallamayaasha IS ay si baad ah bil walba ganacsatada iyo dadka ladan ee ku nool Boosaaso uga qaadaan lacag lagu qiyaasay 72,000 oo Doollar.
Waxay u muuqataa in aysan noqon doonin wakhti dheer goorta Al Shabaab ay cusboonaysiin doonto weerar ay ku qaaddo IS, oo si isa sii taraysa uga qaraabanaysa meelaha Al Shabaab ay ku xooggan yihiin ee koofurta, billaabayna inay canshuuro ku soo rogaan ganacsiyada.
Markii IS ay joogitaanka ku yeelatay Puntland sannadkii 2015, Al Shabaab waxay dhegta dhiigga u dareen dhowr dagaallame oo kooxdaas ka tirsan, dhowr kalena way xireen. Waxay kaloo darajada ka xayuubiyeen rag lagu tuhmay inay taageersan yihiin IS. Olole kaas la mid ah ayaa dhici kara in mar kale la arko.
Kooxda Khilaafada Islaamka